ကြည့်ကောင်းဖို့ထက် ဒီလိုအရည်ချင်းတွေရှိတဲ့ မိန်းကလေး တွေကို သူတို့လက်တွဲချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်း - Focus Myanmar
April 15, 2019 By Myanamr Plus in အချစ်ဆိုင်ရာ Tags: ကလေးထိန်း, ကောင်လေး
တစ်ချို့ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချောတာ၊ လှတာနဲ့ မတိုင်းတာဘူး။ သူတို့နဲ့အဆင်ပြေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားတွေရှိရဲ့လားဆိုတာကိုပဲ ကြည့်တယ်။ ကောင်လေး ကအရမ်းချောနေပြီး တွဲတဲ့မိန်းကလေးက သာမန်လောက်ပဲကြည့်ကောင်းတာမျိုးတွေ တွေ့ဖူးမှာပေါ့။ အချစ်မှာမျက်စိမပါဘူးဆိုတာထက် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့်လူ အချိန်မှန်၊ နေရာမှန်ရောက်ရှိလာခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့က မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချောတာ၊ လှတာ ဘေးဖယ်ပြီး ဘယ်လိုအရာတွေကိုသဘောကျကြတာဖြစ်မလဲ. . . ?
မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ကလေးထိန်း သလိုချစ်ရတာမျိုး ဘယ်ယောက်ျားမှ မကြိုက်ဘူး။ အရမ်းကြီး အားမကိုးပါနဲ့။ တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရပ်တည်နေတဲ့ မိန်းမ မျိုးကိုပဲ သူတို့သဘောကျတယ်။ သိပ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ တစ်ချိန်လုံး ရစ်တွယ်၊ လိုအပ်ကြောင်းမပြနဲ့ ။ အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါကို ကြည့်ပြီးလိုက်လျောညီထွေနေတတ်ဖို့တော့လိုပါမယ်။
ဆက်ဆံရေး တိုင်းမှာ ယုံကြည်မှုကအဓိကပါ။ တစ်ခါလိမ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ သူ့အနေနဲ့ သင့်အပေါ်ဆက်တိုက် စိတ်ခုလို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ သေးငယ်တဲ့လိမ်ဆင်ပဲဖြစ်ပါစေဦးတော့… နာကျင်မှုနည်းပေမယ့် သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားယုံကြည်မှုကိုတော့ အဖုထစ်ဖြစ်သွားစေတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးသားတာကိုပဲသူတို့သဘောကျတယ်။ ရိုးသား ၊ ပွင့်လင်းခြင်းဟာ သူတို့အတွက် ဆွဲဆောင်
မှုတစ်မျိုးပဲ။ တော်ရုံတန်ရုံကိစ္စဆို သူ့ကိုလျှို့ဝှက်မထားပါနဲ့။ အေးဆေးပြောပြလိုက်ပါ။
ယောက်ျားတွေဟာ သန်မာကြံခိုင်မှဖြစ်မယ်လို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက လက်ခံထားပေမယ့် သူတို့အတွက် စိတ်အပန်းဖြေရာနေရာလေးတစ်ခုတော့ ရှိသင့်တယ်မလား? ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ နှစ်သိမ့်အားပေးမယ့် ချစ်သူမိန်းကလေးကို အလိုရှိကြတယ်။ စိတ်ပါလက်ပါနားထောင်ပေးပြီး စကားပြောချောမွေ့ဖို့ပဲလိုမယ်။ သူ့ရဲ့အမေတစ်ယောက်လိုမျိုးအားပေးနှစ်သိမ့်ပေးရုံတင်မက ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်တာမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့။
ယောက်ျားတွေဟာ စကားပြောရတာကြိုက်တယ်။ သူတို့သဘောကျတဲ့အကြောင်းရာတစ်ခုကို အခြားလူကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးချင်တယ်။ စကားပြောရုံတင်မဟုတ်ဘူး.. သူနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမယ့်လူမျိုးကိုလိုလားတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝပြီး အပေးယူတည့်တဲ့ စကားအပြန်လှန်ပြောတာမျိုးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ ဒါဟာ ချစ်သူနဲ့မှမဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်း ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းစကားပြောရင်ဒီလိုပဲ။ ပြောနေတဲ့အကြောင်းရာတွေကို အချက်ကျကျနဲ့ ကွင်းဆက်မပြတ်အောင် ပြောပေးနိုင်သူမျိုးပေါ့ ။
ဒီလိုဉာဏ်လေး မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာပါလာရင် အပိုဆုလို့ပဲပြောရမလား? ဟာသတွေပြောတတ်တဲ့ မိန်းကလေးကို ဘယ်သူက သဘောမကျပဲနေမှာလဲ..သူမကိုမြင်တာနဲ့ စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ မြင်တာနဲ့ စနောက်မယ်။ သင့်ကိုမပျော်ပျော်အောင် သူမလုပ်ပေးတယ်။ ချစ်သူမိန်းကလေးဆိုတာထက်သူငယ်ချင်းလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါင်သင်းရတာမျိုးက သူတို့စိတ်ထဲပိုလွတ်လပ်စေတယ်။
ကွညျ့ကောငျးဖို့ထကျ ဒီလိုအရညျခငျြးတှရှေိတဲ့မိနျးကလေးတှကေို သူတို့လကျတှဲခငျြရတဲ့အကွောငျးရငျး
တဈခြို့ယောကျြားလေးတှဟော မိနျးကလေးတဈယောကျကို ခြောတာ၊ လှတာနဲ့ မတိုငျးတာဘူး။ သူတို့နဲ့အဆငျပွမေယျ့ ကိုယျကငျြ့တရားတှရှေိရဲ့လားဆိုတာကိုပဲ ကွညျ့တယျ။ ကောငျလေးကအရမျးခြောနပွေီး တှဲတဲ့မိနျးကလေးက သာမနျလောကျပဲကွညျ့ကောငျးတာမြိုးတှေ တှဖေူ့းမှာပေါ့။ အခဈြမှာမကျြစိမပါဘူးဆိုတာထကျ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောမယျ့လူ အခြိနျမှနျ၊ နရောမှနျရောကျရှိလာခွငျးဟာ အကောငျးဆုံးလို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ။ သူတို့က မိနျးကလေးတဈယောကျကို ခြောတာ၊ လှတာ ဘေးဖယျပွီး ဘယျလိုအရာတှကေိုသဘောကကြွတာဖွဈမလဲ. . . ?
မိနျးမတဈယောကျကို ကလေးထိနျးသလိုခဈြရတာမြိုး ဘယျယောကျြားမှ မကွိုကျဘူး။ အရမျးကွီး အားမကိုးပါနဲ့။ တတျနိုငျသလောကျ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီး ရပျတညျနတေဲ့ မိနျးမမြိုးကိုပဲ သူတို့သဘောကတြယျ။ သိပျမလိုအပျပဲနဲ့ တဈခြိနျလုံး ရဈတှယျ၊ လိုအပျကွောငျးမပွနဲ့ ။ အခွအေနနေဲ့အခြိနျခါကို ကွညျ့ပွီးလိုကျလြောညီထှနေတေတျဖို့တော့လိုပါမယျ။
ဆကျဆံရေးတိုငျးမှာ ယုံကွညျမှုကအဓိကပါ။ တဈခါလိမျလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ သူ့အနနေဲ့ သငျ့အပျေါဆကျတိုကျ စိတျခုလို့ပွီးမှာမဟုတျတော့ဘူး။ သေးငယျတဲ့လိမျဆငျပဲဖွဈပါစဦေးတော့… နာကငျြမှုနညျးပမေယျ့ သငျတို့နှဈယောကျကွားယုံကွညျမှုကိုတော့ အဖုထဈဖွဈသှားစတေယျ။ ဒါကွောငျ့ ရိုးသားတာကိုပဲသူတို့သဘောကတြယျ။ ရိုးသား ၊ ပှငျ့လငျးခွငျးဟာ သူတို့အတှကျ ဆှဲဆောငျ
မှုတဈမြိုးပဲ။ တျောရုံတနျရုံကိစ်စဆို သူ့ကိုလြှို့ဝှကျမထားပါနဲ့။ အေးဆေးပွောပွလိုကျပါ။
ယောကျြားတှဟော သနျမာကွံခိုငျမှဖွဈမယျလို့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးတဈခုက လကျခံထားပမေယျ့ သူတို့အတှကျ စိတျအပနျးဖွရောနရောလေးတဈခုတော့ ရှိသငျ့တယျမလား? ခကျခဲတဲ့အခြိနျတှနေဲ့ ကွုံတှတေဲ့အခါ စိတျထှကျပေါကျအနနေဲ့ နှဈသိမျ့အားပေးမယျ့ ခဈြသူမိနျးကလေးကို အလိုရှိကွတယျ။ စိတျပါလကျပါနားထောငျပေးပွီး စကားပွောခြောမှဖေို့ပဲလိုမယျ။ သူ့ရဲ့အမတေဈယောကျလိုမြိုးအားပေးနှဈသိမျ့ပေးရုံတငျမက ကွိုးကိုငျခွယျလှယျတာမြိုးတော့မလုပျပါနဲ့။
ယောကျြားတှဟော စကားပွောရတာကွိုကျတယျ။ သူတို့သဘောကတြဲ့အကွောငျးရာတဈခုကို အခွားလူကိုပွနျလညျဝမြှေပေးခငျြတယျ။ စကားပွောရုံတငျမဟုတျဘူး.. သူနဲ့အပွနျအလှနျဆှေးနှေးမယျ့လူမြိုးကိုလိုလားတယျ။ အဓိပ်ပာယျပွညျ့ဝပွီး အပေးယူတညျ့တဲ့ စကားအပွနျလှနျပွောတာမြိုးဖွဈနဖေို့လိုတယျ။ ဒါဟာ ခဈြသူနဲ့မှမဟုတျဘူး။ သူငယျခငျြး ၊ မိသားစုဝငျတှနေဲ့လညျးစကားပွောရငျဒီလိုပဲ။ ပွောနတေဲ့အကွောငျးရာတှကေို အခကျြကကြနြဲ့ ကှငျးဆကျမပွတျအောငျ ပွောပေးနိုငျသူမြိုးပေါ့ ။
ဒီလိုဉာဏျလေး မိနျးကလေးတဈယောကျမှာပါလာရငျ အပိုဆုလို့ပဲပွောရမလား? ဟာသတှပွေောတတျတဲ့ မိနျးကလေးကို ဘယျသူက သဘောမကပြဲနမှောလဲ..သူမကိုမွငျတာနဲ့ စိတျခမျြးသာရတယျ။ မွငျတာနဲ့ စနောကျမယျ။ သငျ့ကိုမပြျောပြျောအောငျ သူမလုပျပေးတယျ။ ခဈြသူမိနျးကလေးဆိုတာထကျသူငယျခငျြးလို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပေါငျသငျးရတာမြိုးက သူတို့စိတျထဲပိုလှတျလပျစတေယျ။